Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana: Niomana hiarahaba tonga soa an’i Paul Kagame
vendredi, 28 juin 2019 22:17
Tranga isany nanamarika ny fankalazana ny fetim-pirenena ny 26 jona 2019 ny fahitana an-dramatoa Lalao Ravalomanana niaraka tamin’ny samboady maha Ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra azy teny am-balahany, raha nigadona teo Mahamasina.
Raha ny fahitana azy dia efa nivonona i Lalao Ravalomanana handray sy hiarahaba ireo filoham-pirenena roa tonta, dia ny filoha Andry Rajoelina sy ny filohan’i Rwanda Paul Kagame tonga soa eto amin’ny tanànan’Antananarivo sy eo amin’ny Kianja monisipaly Mahamasina.
Fomba amam-panaon’ny tanàna mandray vahiny rahateo izany, ary fotodrafitrasa eo ambany fiadidian’ny tanànan’Antananarivo ihany koa ny kianjaben’i Mahamasina.
Tsy nisy ampaham-potoana nisehoan’izay fandraisana amim-panajana izay teo Mahamasina iny andron’ny 26 jona iny. Fanovana tamin’ny fotoana farany ny arofenitra no re fa antony ; arofenitra izay mahabe resaka ireo niofana ho amin’izany, ny fomba nitondran’ny mpikarakara iny lanonana teo Mahamasina iny azy.
Tsy fahita maneran-tany izany arofenitra mialoha lalana ny filoham-pirenena mandritra ny fisafoana andihan-tafika, toy ny izy indray no misafo mialohan'ny Filoham-pirenena.
Raha ny angom-baovao, dia nahatohina ireo be galona izany fihetsika izany, ny arofenitra, raha ny voalaza dia nahazo baiko tamin'ireo sivily tao andapa, na dia efa nilaza aza izy fa tsy mety izany. Baiko hoy ireo tandapa ka tanteraho.
Ny filoha Paul Kagame aza, raha ny filazan'ireo mpahay arofenitra, dia tokony notsenaina ary nisy niarahaba, fa tsy nentina maina fotsiny tery aloha. Ny Filoha aza tsara kokoa raha nitondra azy niarahaba ireo filohan'ny andrimpanjakana teo an-toerana, hoy hatrany ireo arofenitra matihanina.
Manoloana iny tranga iny dia manamarika ireo mpandinika politika fa dia nabaribarin’ny mpitondra teo imason’izao tontolo izao ny tsy fifankahazoana misy eo amin’ny Fanjakana foibe sy ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo tarihin-dRtoa Lalao Ravalomanana, izay hita mazava moa fa dia atao fahirano ny tanan'Antananarivo satria tsy mitovy firehana amin'ny mpitondra foibe.
Dia mbola izany hatrany ve, hoy ireo mpandinika politika no itondrana ny fiainam-pirenena, izay Kaominina tsy mitovy firehana, dia fahirano no miandry azy? Aiza ilay fitsinjaram-pahefana tena izy dradradradraina isan'andro, sy ny fampiraisana ny Malagasy rehetra?